Ixhala kubulawa uthisha esikoleni
UBEBHEKE ekilasini uMnuz Sibonakaliso Nyawose ngesikhathi edutshulwa ngamadoda angaziwa. Lapha amaphoyisa abemboza isidumbu sakhe Isithombe: MOTSHWARI MOFOKENG/ANA
BONISWA MOHALE | June 12, 2019
BAKHALA ngezokuphepha othisha baseFolweni emuva kokudutshulwa kukazakwabo, uMnuz Sibonakaliso Nyawose (48), odutshulwe washona emagcekeni aseMasuku Primary izolo.
Lo thisha odutshulwe ngamadoda amabili angaziwa, eya ekilasini, uchazwe njengomuntu obenomusa futhi obengakaze akhale ngezitha.
Othisha bezikole zaseFolweni abebezoduduza ozakwabo eMasuku Primary, bathe bazizwa bengaphephile uma kunabantu abakwazi ukungena esikoleni badubule uthisha maqede babaleke.
Yize othisha baseMasuku bengathandanga ukukhuluma nabezindaba kodwa ozakwabo abebezobaduduza bakubeke kwacaca ukuthi kufanele kuqiniswe ezokuphepha.
UNobhala weSouth African Democratic Teachers Union (Sadtu) KwaZulu-Natal, uNksz Nomarashiya Caluza, uthe kudala bekhala ngezokuphepha ezikoleni ngoba othisha bayahlaselwa, abanye badutshulwe njengoba kwenzeke kuNyawose.
Uthe baphatheke kabi kakhulu ngokudutshulwa kukaNyawose obeyilungu labo ngoba kukhombisa ngokusobala ukuthi akuphephile ezikoleni.
“Simtshelile uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Kwazi Mshengu ukuthi akuphephile ezikoleni. Siyacela aqinise ezokuphepha. Kunalokho simbona ehambela izikole eyohlola isimo, esikhundleni sokuqinisa ezokuphepha. Kuyasikhathaza ukuthi othisha baphuma emakhaya beyosebenza ezikoleni kodwa bafike balinyazwe noma babulawe njengoba kwenzeke kuNyawose,” kusho uNksz Caluza.
Uthe njengoba abantu abadubule uNyawose kuthiwa bahambe ngezinyawo sebephuma esikoleni, kufanele umphakathi utshele amaphoyisa imininingwane ngalabo bantu ukuze baboshwe.
Ebuzwa ukuthi ngabe bekunombango wezikhundla yini eMasuku, uNksz Caluza uthe awukho umbango oke waba khona kodwa kuke kwaba nenkinga kathishomkhulu obephatha isibhamu.
“Inkinga eke yaba khona ekathishomkhulu obephatha isibhamu. Kodwa ibixazululekile ngoba ubesebika esekethe,” kusho uNksz Caluza.
Umfowabo kaNyawose, uMnuz Muzomuhle Magwaza umchaze njengomuntu obenomusa, ethanda umndeni wakhe.
Uthe ubengakaze ababikele ukuthi kukhona axabene nabo noma izitha ezithile.
“Sithukile ngokubulawa kukamfowethu ngoba akakaze asitshele ukuthi unezitha. Ubesebe wuthisha iminyaka eminingi kulesi sikole. Ufike kuso cishe eminyakeni emithathu noma emine edlule. Kubuhlungu kakhulu okusehlele ngoba umfowethu ushiye izingane, umkakhe nathi siwumndeni,” kusho uMagwaza.
Ikhansela lendawo, uMnuz Thokozani Xulu licele abanemininingwane ngalesi sigameko ukuba bathinte amaphoyisa ukuze kuboshwe izigebengu.
Uthe kuyaqala ukuthi kudutshulwe uthisha eMasuku, bashaqekile bewumphakathi.
“Asifuni ukuqagela ngokwenzekile. Kodwa sizwe kuthiwa uthisha udutshulwe ngabafana ababili. Sizwe nokuthi amakhamera esikole acekelwe phansi emasontweni edlule. Asinaso isiqiniseko sokuthi ngabe abesesebenza yini ngesikhathi kudutshulwa uthisha. Sikhathazekile kakhulu ngokwenzekile. Siyacela amaphoyisa aqinise uphenyo lwawo,” kusho uXulu.
UColonel Thembeka Mbele wamaphoyisa KwaZulu-Natal, uthe amaphoyisa aphenya icala lokubulala emuva kokuthi abasolwa ababili bedubule kwashona uthisha.
Uthe okwamanje kayaziwa imbangela yokubulawa kukathisha kodwa amaphoyisa asaphenya.
Abafundi basheshe badedelwa emuva kwalesi sigameko ngoba othisha nabafundi bebesathukile.
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Kwazi Mshengu, uthe bashaqekile ngokwenzeke eMasuku Primary. Uthe uzwelana kakhulu nomndeni.
Ucele amaphoyisa ukuthi aphuthume nophenyo lwawo ukuze kujeziswe izigebengu ezingenanembeza ezibulala othisha.
Uthe uzoya emndenini kathisha oshonile, ukuze abone ukuthi uzosekwa kanjani.